Yeka iphupho ngendodakazi engaphambili: umhlangano nentombazane eyayiyintombazane, ewanga ephusheni nentombazane yangaphambili
Kungani intombazane yangaphambili iphupha? Ukuchazwa kwephupho ngendodakazi yangaphambili
Uma intombazane yangaphambili iphupha, kubalulekile ukunaka imizwelo yakho, ngoba imibono yonke yasebusuku ixhomeke ngokuqondile emzimbeni wethu wangaphakathi. Okulungile ukuwahumusha, udinga ukucabangela noma iyiphi imininingwane ongayikhumbula ekuseni ezayo.
Ukuhumusha: ukubona intombazane yangaphambili ephusheni
Ukuba khona kwezinkumbulo ezimnandi emva kokuvuswa kusikisela ukuthi ubuhlobo bakho ne-ex-intombi buphelile futhi usufike esiphethweni esinengqondo ngokuphelele.
Uma ekuseni unganiki ukuphumula ezinkumbulo zakho, kungenzeka ukuthi ubudlelwane nentombazane yangaphambili empeleni akuphelelanga ngokugcwele futhi kufanele ukhulume. Lokhu akusho ukuthi uzokwazi ukubuyisela ukuxhumana okusheshayo, kodwa ngeke kuzwakale ukuzwakala.
Umhumushi wephupho uhumusha iphupho le-intombi yangaphambili yesoka lakhe, njengendlela yokubonakalisa ukukhathazeka mayelana nesikhathi esidlule sephupho kanye nabantu abazungezile. Akabikezeli lutho olubi, kodwa kubonisa kuphela ukuthi ukuphazamiseka nokukhathazeka kuyize.
Kubantu abasha, ukukhishwa kwangaphambili kungaba yinto ephathekayo yobudlelwane obusha bokuthandana. Ikakhulukazi uma umhlangabeza ngempela ngengozi.
Uma uvame ukuphuka ngocansi nomuntu osekuqaleni, kufanele ulungele ukuthi maduzane abantu noma izenzakalo ezidlule zizokukhumbuza. Ayikho isiqiniseko sokuthi imizwelo evela kulo iyoba mnandi, kepha ukukhathazeka kuqinisekisiwe.
Uma ephupha ukuthi labo abaqalayo babuya, isikhathi sokuphulukiswa ngemva kokuxhumana okuphazamisekile sekuphelile futhi le nsizwa ikulungele ngokugcwele abantu abajwayele ukuxhumana nabo nokuxhumana.
Uma amaphupho wangaphambili nomfana wakhe omusha
Iminye imininingwane ingasiza umphuphi ukuba aziqonde kangcono yena nemizwelo yakhe.
Ukubona intombi yakho yangaphambili neyendodana entsha kusho ukuthi intombi yangempela ifuna ukubhalisa ubuhlobo, futhi kuzokwenza konke okusemandleni ukukwenza.
Umshado ne-ex-intombi kusho ukuthi empilweni yangempela insizwa iyothatha umndeni wayo maduzane.
Uma owesifazane onjalo enephupho enomusa omusha, kanti umphuphi uyaqhubeka ehlangana naye ngasese empilweni yangempela, khona-ke kufanele ahlolisise indawo ezungezile. Kukhona owesifazane osemncane ozwelana naye, kodwa wesaba ukwamukela imizwa yakhe.
Uma uphupha ukumanga noma ezinye izenzo nentombi yangaphambili
Ukwelashwa okuthandwa kakhulu kokumanga encwadini yephupho likaMiller kuthi umuntu olele unenkinga eningi esuselwe esikhathini esidlule. Ukusebenzisana nabo kuzokwenzeka kuphela uma kwenzeka umuntu ekhulula imicimbi yonke edlule, ehluleka ukuhlushwa izinkumbulo futhi aqale ukuqhubeka.
Uma ephusheni lakho ukukhala kwangaphambili, khona-ke ungase ube nezinkinga eziningi empeleni. Kodwa kunesici esihle: ubunzima bakho buzobangela isihawu phakathi kwenani elikhulu labanye futhi bayojabula ngokuvumelana ukukusiza ukuxazulula.
Owakhulume okhulelwe ubeka ubunzima ebuhlotsheni obusha. Mhlawumbe, zizophela ngesikhathi sokuphumula, njengalezo zangaphambilini, kodwa icala lomsolwa ngeke libe kulokhu.
Kubalulekile ukunaka incazelo, uma ngabe intombazane yangaphambili yayingazange iphuphe isikhathi eside ngaphambili, futhi ngokungazelelwe yaba heroine yemibono yasebusuku. Cishe, wayesephupha ngephupho, futhi kungenzeka ukuthi usakaze zonke izinhlobo zamahemuhemu ngaye. Ukwelashwa okufanayo kusebenza kumfazi wangaphambili, okuwukuphela kwesichibiyelo ukuthi umfazi wangaphambili wezomthetho ubonisa izinguquko ezinhle ebusweni bomuntu siqu.
Amaphupho okugeza emhlabathini, yini lokhu?
Indoda idonsa ephusheni, lokho kusho ukuthini?
I-pepper yesiBulgaria yayinamathele ngesitayela sesiGreki
Imithetho eyisikhombisa yabesifazane ema-30s
Influenza ezinganeni kuze kube unyaka: kanjani ukwelapha?
I-Pasta ne-Brussels amahlumela ne-bacon
Amadevu wegolide: izindawo, ukunakekelwa, amathiphu
Ukukhulelwa kuthatha kanjani izinyanga ezingu-9?
Ikhekhe elimnandi kakhulu
Isinkwa esivela ku-high quality zucchini
Ukukhulisa ingane ngaphandle kobaba
Kungani umuntu enomqondo wesitayela?
Izinhlelo ezivumela ukutadisha phesheya